MAZANO UYE MATINJI - MUTONGI
Iwo gumi nematatu akanakisa asina-kubata infrared thermometers
Dai 14, 2022 Kubvumbi 30, 2022 ndima Anais Fontaine
Nepo isu tichigona kudzokera kuchikoro, kushanda uye kuwanazve zvakajairika, kutyisidzira kweCCIDID kuchiri kupera. Miedzo inogona kunge isingawanikwe nyore kumunhu wese uye kwese kwese, saka imwe yedzakanakisa nzira dzekuyera tembiricha yako ndeye kushandisa thermometer. Sezvo tichida kudzivirira zvakanyanya ... Verenga zvimwe ...
Categories MAZANO UYE MATINJI
10 akanakisa efoni screen magnifiers e iPhone uye Android vashandisi
Hapana kupokana kuti kuona bhaisikopo kana kuratidza padiki diki refoni yako hazvienzaniswi nekuona kwekuona kwechidzitiro chikuru. Iwe kazhinji unofanirwa kuchinjira kune piritsi kana mudziyo wekutepfenyura wakabatana neTV yako. Asi waiziva here kuti kune imwe... Verenga zvimwe ...
Categories MAZANO UYE MATINJI, Uncategorized
Campfires muMinecraft: Zvese Vatambi Vanofanira Kuziva
Macampire akawedzerwa kuMinecraft mushanduro 1.14, inozivikanwawo seMusha & Pillage update. Vane huwandu hwemashandisirwo anozobatsira vatambi zvakanaka kubva pakutanga kusvika pakupedzisira parwendo rwavo. Uyezve verenga: Maitiro ekugadzira Auto-Crop Farm muMinecraft... Verenga zvimwe ...
Iwo 7 akanakisa maBluetooth kiyibhodhi emapiritsi
Vapepeti vedu vakazvimiririra vanotsvaga, edza uye kurudzira zvigadzirwa zvakanakisa; iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve yedu yekuongorora maitiro pano. Tinogona kugamuchira makomisheni pakutenga kunoitwa kubva kune yedu yakasarudzwa link. Recap Yakanyanya Kupfuura Zvose: Arteck Universal Kiyibhodhi kuAmazon "Iyo Arteck ine rechargeable lithium bhatiri ine simba ... Verenga zvimwe ...
Maitiro ekugadzira auto kukura purazi muMinecraft
Sezvakangoita muhupenyu chaihwo, vatambi vanogona kudyara zvirimwa muMinecraft. Mbeu dzinogona kudyarwa paminda yakarimwa chete. Mushure mekudyara mbeu, zvinotora nguva kuti ikure kuita chirimwa. Minecraft vatambi vanogona otomatiki uye nemazvo kuchera marudzi ese ezviwanikwa. The… Verenga zvimwe ...
Minecraft Bedrock beta 1.16.230.56 chigamba manotsi: chizvarwa chitsva chemapako, Zombie Village inogadzirisa uye dzimwe shanduko.
Iyo itsva Minecraft Bedrock Edition beta 1.16.230.56 inounza zvinhu zvitsva zvakasiyana-siyana kumutambo, kusanganisira iyo yakamirirwa kwenguva refu yebako chizvarwa, yakagadziridzwa ore uye mine shaft chizvarwa pamwe nekuwanda kwebug kugadzirisa. Iyi ndiyo yekutanga beta yeMinecraft: Bedrock Edition kuburitswa mushure ... Verenga zvimwe ...
Maitiro ekuigadzirisa kana Windows 10 keyboard isiri kushanda
Kiyibhodhi isiri kushanda ine waya kana isina waya inogona kushungurudza zvakanyanya vashandisi veWindows 10. 10 Akanakisa Wireless Mechanical Keyboards Matambudziko akadai anogona... Verenga zvimwe ...
Maitiro ekuzvigadzirisa kana yako Stadia controller isingabatanidzi
Iyo Google Stadia controller yakasarudzika nekuti inokwanisa kubatana nenzira dzakasiyana. Inonyanya kushandiswa kubatanidza pamusoro peWi-Fi kutamba mitambo yeStadia, asi zvakare ine yakavakirwa-mukati USB-C uye Bluetooth chiteshi. Zvichienderana nekuti unoedza sei kubatanidza yako Stadia Controller, iyo ... Verenga zvimwe ...
Microsoft Surface: ndeipi yekusarudza?
Heino mhedziso yeese maSurface mavhezheni ekukubatsira iwe kusarudza Microsoft's Surface mutsara wemakomputa ekubata-bata yakaunzwa muna 2012, yakatanga kuvhurwa kumisikidza mitsva yevamwe vagadziri veWindows michina. Nhasi, kambani inopa mitsetse minomwe yakasiyana-siyana yezvigadzirwa iyo inovavarira kuzadzisa zvinodiwa zvakasiyana ... Verenga zvimwe ...
Yakanakisa Scuf controller kuseta yeKufona Kwebasa: Warzone
Nekutanga kweMwaka 3 weKudanwa Kwebasa: Hondo Yemazuva Ano muna Kubvumbi 7, 2020, uye nayo, zvitsva zveWarzone zvakare. Gadzirira kuhwina neakanakisa controller setups kubva kuSCUF yeKudanwa kweDuty Warzone, yekutanga yemahara mutambo muCall of Duty Hondo Royale. SCUF PRESTIGE Ping… Verenga zvimwe ...
peji1 peji2 ... peji10 → zvinotevera
Tiny Tina Wonderlands Update 1.0.3.0A Patch Notes Nhasi (Chivabvu 19)
Rudo, Rufu & Robhoti Season 3 Netflix Release Time Inotsanangurwa
Urusei Yatsura Anime Yakaziviswa NeNew PV uye Yepamutemo Trailer
Maitiro ekutora iyo Ashsassin Volcano Fortnite Ganda Yemahara
Genshin Impact 2.7 Live Stream Schedule Yakaburitswa Zviri pamutemo
Clause de non-respondabilité
© 2022 MUTAURI • Yakavakwa ne GeneratePress